Naag xamili kari weyday jacaylka ninkeeda u qabo oo furiin dalbatey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Naag xamili kari weyday jacaylka ninkeeda u qabo oo furiin dalbatey
Carabta khaliijka ku nool waxa caadi u ah inay markasta isha ku hayaan xaasaskooda, taas oo aan jacayl ka ahayn ee ay ka tahay masayr ay ka qabaan in loo weydaarto.
Waxa marar badan aan ka maqlaa haween Somaliyeed oo leh bal fiiriya sida ninkaas carbeed naagtiisa ugu daba dhegan yahay mase oga in waxani jacayl ahayn. Hadaba naag Imaaraati ah oo qaati ka joogsatey nin aad u jecel ayaa dalbatey furiin.
Waa u caadi Carabtaas in ninku naagtiisa u soo adeego maadaama uuna ku aaminayn suuqa iyo weliba dhaqanka jira awgeed. Hadaba haweenaydan waxay leedahay ninkeyga waa kariyaa cuntada, guriga waa nadiifiyaa, wuxuuna ii qabaa jacayl saaida.
”Naqaska ayaa igu dhegay, jacayl intaas ka badan ma qaadi karo, xataa ilama murmo, iga tag iguma yiraa, ma xamili karo jacayl sidaasa waa in leyga furaa ayay tiri.
Nolosheyda kor iyo hoos ayay u jeedaa, hal maalin oo murana ma Jiro, had iyo jeer amaan joogta ah, waxaan u baahanahay dood xalaala oo kala duwan, taasi ma dhacayso. Ninkaan hala iga furo.
Waxa jirtey cabasho ka timi buurnaantiisa tiina waxa la sheegay inuu markiiba bilaabey siduu isku caateyn lahaa, kadibna lug wax ka noqdey is caateyntii.
Ninkeeda ayaa sheegay inuuna waxba galabsan, kana codsaday maxkamada inayna ogolaanin furiinka. Maxkamada ayaa dacwada haweenayda dib u dhigtey dalbateyna in la kala dhexgalo.
Waxa qisadan mid la mida iyadna ninkeeda looga furey haweenay macalimad ah dalkaasi Masar oo sheegtay in ninkeedu miskiin dhaafay oo go’aamada badankooda aan anigu sameeyo. Caruurta ma edbinaayo ayay tiri.